SANTHITSA - Page 10 of 217 - NEWS & MEDIA
ကမ္ဘာကြီး ကို ကယ်တင်ဖို့ အချိန်တွေ အကုန်မြန်နေတယ်လို့ အိုဘားမား ငြီးတွား
ကမ္ဘာကြီး ကို ကယ်တင်ဖို့ အချိန်တွေ အကုန်မြန်နေတယ်လို့ အိုဘားမား ငြီးတွား မောင်ယဿ ( နိုဝင်ဘာ ၈ ) COP26 ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဆိုင်ရာ ညီလာခံကျင်းပနေတဲ့ စကော်တလန်က ဂလက်စကိုမြို့ ကို ရောက်နေတဲ့ အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဘာရက်အိုဘားမားက အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုတွေကို လျှော့ချဖို့နဲ့ ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှု ကို ဝိုင်းဝန်တားဆီးပေး ကြဖို့အတွက် ဒီကနေ့ မနက်မိန့်ခွန်းမှာ အချိန်တွေ အကုန်မြန်တယ်လို့ ငြီးတွားရင်းသတိပေးပြောကြားသွားပါတယ်။ “ ကျနော်တို့ တည်ရှိနေတဲ့ နေရာမှာ ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့အတွက် မတတ်နိုင်ကြတော့ဘူးလားဗျာ ။ ကျနော်တို့ ကမ္ဘာကြီးကို ပြန်တည်ဆောက် ကြရအောင်ဗျာ။ အခုပဲ ပြန်ပြီးတည်ဆောက် ကြရအောင်ဗျာ.။ ကျနော်တို့ မြန်မြန် …
ဂိုးပေါက်တစ်ကြိမ်မှ မတည့်ခဲ့တာတောင် ကျေနပ်နေတဲ့ စပါးနည်းပြ ကွန်တီ
ဂိုးပေါက်တစ်ကြိမ်မှ မတည့်ခဲ့တာတောင် ကျေနပ်နေတဲ့ စပါးနည်းပြ ကွန်တီ စပါးအသင်းရဲ့ နည်းပြသစ်ဖြစ်သူ ကွန်တီကတော့ အဲဗာတန် အသင်းနဲ့ သရေကျခဲ့တာကို စိတ်မပျက်ကြောင်းနဲ့ သူ့ အသင်းရဲ့ ကစားပုံကြောင့် လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေအတွက် ယုံကြည်မှု ပိုရှိလာ တယ်လို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲစဉ်မှာ စပါးအသင်းဟာ အဲဗာတန်ဂိုးသမား ဂျော်ဒန်ပစ်ဖိုဒ့်ကို ထိထိရောက်ရောက် ဖိအားမပေး နိုင်ခဲ့သလို တိုက်စစ်မှုးဟယ်ရီကိန်းကလည်း ရေမြွေတစ်ကောင်လို အဆိပ်ကင်းမဲ့နေခဲ့တာပါ။ လူစားဝင်ကစားသမား လိုကယ်ဆိုရဲ့ အဝေးကန်ချက်က ဂိုးတိုင်ထိသွားခဲ့တာကလွဲရင် တစ်ပွဲလုံးမှာ ဂိုးပေါက်တည့်တာ တစ်ကြိမ်တောင်မှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ အရင်တစ်ပတ်က မန်ယူကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်း စပါးအသင်းအနေနဲ့ ဂိုးပေါက်တည့်တာ တစ်ကြိမ်မှမရှိခဲ့တဲ့အတွက် အခုလို ပရီးမီးယားလိဂ်နှစ်ပွဲဆက်တိုက် ဂိုးပေါက်မတည့်တာဟာ စပါးအသင်းအတွက် ၂၀၀၃/၀၄ ရာသီနောက်ပိုင်း …
တစ်ပွဲမှသာမကန်ရသေးတာ လစာက ပေါင်လေးသန်းလောက်ရနေပြီဖြစ်တဲ့ ရာမိုစ့်
တစ်ပွဲမှသာမကန်ရသေးတာ လစာက ပေါင်လေးသန်းလောက်ရနေပြီဖြစ်တဲ့ ရာမိုစ့် အသင်းကို စရောက်တည်းက အခုထိမကစားနိုင်သေးတဲ့ နောက်ခံလူ ရာမိုစ့်ကို PSG အသင်းဖက်က စာချုပ်ဖျက်သိမ်းဖို့ ကြံနေတယ်ဆိုပြီး အရင်လထဲမှာ သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ရာမိုစ့်ရဲ့အေးဂျင့်တစ်ဖြစ်လဲ ညီအစ်ကိုတော်စပ်သူ ရီနီကတော့ ရာမိုစ့်အနေနဲ့ အသင်းမှာ တစ်ပွဲမှမကစားရသေးပဲနဲ့ PSG ကနေ ထွက်ခွာဦးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ အသက် (၃၅)နှစ်အရွယ် ရာမိုစ့်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့လေးလလောက်တည်းက PSG အသင်းနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲ့တည်းက ဒဏ်ရာရရှိနေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရာမိုစ့်ဟာ အသင်းကိုစရောက်တည်းက ပွဲထွက် ကစားပေးနိုင်ဖို့အတွက် ဒဏ်ရာအမြန်သက်သာလာအောင်နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း ဆင်းနိုင်အောင် ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။ အောက်တိုဘာလအတွင်းက ရာမိုစ့်ဟာ PSG အသင်းတွက် ပွဲထွက်ကစားပေးနိုင်ဖို့ နီးစပ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း …
ကွန်တီက ရှော့ ရှိတဲ့နည်းပြ မို့ ခဏခဏ အလုပ် ပြုတ်တာ ပါလို့ အီတလီ တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ခပ်ရိရိပြော
ကွန်တီက ရှော့ ရှိတဲ့နည်းပြ မို့ ခဏခဏ အလုပ် ပြုတ်တာ ပါလို့ အီတလီ တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ခပ်ရိရိပြော မောင်ယဿ ( နိုဝင်ဘာ ၈ ) မကြာသေးခင်က စပါးအသင်းရဲ့ နည်းပြအဖြစ်ရောက်လာတဲ့ အီတလီသားနည်းပြ အန်တိုနီယိုကွန်တီ ကို တစ်နိုင်ငံတည်းသား အီတလီလက်ရွေးစင် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း အန်တိုနီယို ကတ်ဆာကိုက ကွန်တီက တတိယ အဆင့်သာသာလောက်ပဲ ရှိတဲ့ နည်းပြဖြစ်တယ်လို့ လှောင်ပြောင်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ Bobo TV နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ကတ်ဆာကိုက “ သူ စပါးနည်းပြ အလုပ်ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်မှာ အံအားသင့်စရာ တစ်ခုမှ မရှိပါဘူးဗျာ။ နားလည်အောင်ပြော ပြရရင် သူအင်တာမီလန်က …
(၃) ပွဲဆက်ရှုံးပြီးနောက်ပိုင်း ပြိုင်ပွဲစုံ (၁၀) ဆက် ရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့ အာဆင်နယ်
(၃) ပွဲဆက်ရှုံးပြီးနောက်ပိုင်း ပြိုင်ပွဲစုံ (၁၀) ဆက် ရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့ အာဆင်နယ် အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အသက် ၂၁ နွဈအရွယ် လူငယ်ကစားသမား စမဈရိုဝီကေတာ့ ကြောနံပါတ် ၁၀ ဝတ်ဆင်ထားသူပီပီ အသင်းအတွက် ခြေစွမ်းပြကစားနေခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲစုံ ၈ ပွဲမွာ ၅ ဂိုးသွင်း ၂ ဂိုးသွင်းယူပေးထားခဲ့ကာ အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းကို တံခါးစတင်ခေါက်နေပြီလည်းဖြဈပါတယ်။ ဝက်ဖိုဒ့်အသင်းနဲ့ပွဲမွာ ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့် စမဈရိုဝီဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မွာ သုံးပွဲဆက်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ အသက် ၂၁ နွဈေအာက် လူငယ် ကစားသမားအဖြဈ နီကိုလက်ဈ အနယ်ကာ၊ အန်တိုနီယို ရီရက်ဈ၊ ဖာဘရီဂတ်ဈတို့နဲ့အတူ လေးဦးမြောက် မွတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီလည်း ဖြဈပါတယ်။ သူက အက်စတွန်ဗီလာ၊ …
၂၀၂၁ ဘောလွန်းဒီအောဆုကို ဘယ်သူတွေ ဘာကြောင့်ရသင့်တာလဲ
၂၀၂၁ ဘောလွန်းဒီအောဆုကို ဘယ်သူတွေ ဘာကြောင့်ရသင့်တာလဲ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ မချီးမြှင့် မကျင်းပဖြစ်ခဲ့တဲ့ Ballon D’or ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ပြန်လည်ကျင်းပတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆုအတွက် ဇကာတင် အယောက် ၃၀ စာရင်းလည်း ထွက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလွန်းဒီအောဆုဇကာတင်စာရင်းမှာ အကြိမ်များဆုံးပါဝင်ခွင့်ရထားတဲ့ စီရော်နယ်ဒိုလည်း ၁၇ ကြိမ်မြောက် ထပ်မံပါဝင်ခဲ့သလို ဒုတိယအများဆုံးကစားသမားဖြစ်တဲ့ မက်ဆီကလည်း ၁၅ ကြိမ်မြောက် အဖြစ်ပါဝင် ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဆုကို ၆ ကြိမ်အထိစံချိန်တင် ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့ မက်ဆီအနေနဲ့ ၇ ကြိမ်မြောက်အဖြစ် ဆက်လက်ဆွတ်ခူးနိုင်ဖို့လည်း ရေပန်းစားနေသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ ဘောလွန်းဒီအောဆုကို ဆွတ်ခူးဖို့ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ကစားသမားတွေရဲ့ …
မန်ယူရဲ့ နောက်တန်း ၃ ယောက် ကစားကွက်ကြောင့် ရှုံး ရတာလို့ ရှမိုက်ကယ်ဆို
မန်ယူရဲ့ နောက်တန်း ၃ ယောက် ကစားကွက်ကြောင့် ရှုံး ရတာလို့ ရှမိုက်ကယ်ဆို မောင်ယဿ ( နိုဝင်ဘာ ၈ ) စနေနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာ ဒါဘီပွဲမှာ အိမ်ရှင် မန်ယူက မန်စီတီးကို ( ၂- ၀ ) ဂိုးနဲ့ အရှုံးပေးလိုက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒိ ( ၃ – ၅ – ၂ ) ကစားကွက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မန်ယူရွှေခေတ် ဂိုးသမားကြီး ပီတာရှမိုက်ကယ်က ဆိုးရှားရဲ့ နောက်တန်း ၃ ယောက် ကစားကွက် က အလုပ်မဖြစ်ဘူး ။ အဲ့ဒိ ကစားကွက် ကြောင့် …
ပုလဲဆိုတာ ဘယ်တော့မှ အရောင်မမှိန်ဘူးလို့ အာကြီးနည်းပြ ဟစ်ကြွေး
ပုလဲဆိုတာ ဘယ်တော့မှ အရောင်မမှိန်ဘူးလို့ အာကြီးနည်းပြ ဟစ်ကြွေး မောင်ယဿ ( နိုဝင်ဘာ ၈ ) မနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ ပရီမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၁၁ မှာ အာဆင်နယ်အသင်းက အိမ်ကွင်းမှာ ဝတ်ဖို့ဒ်အသင်း ကို ( ၁ – ၀ ) ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူပြီး နောက်မှာတော့ နည်းပြဖြစ်သူ မိုက်ကယ်အာတီတာက ပုလဲမှန်ရင် အရောင်းမမှိန်သလို ပတ္တမြားမှန်ရင် နွံ့ မနစ်ဘူး လို့ ဂုဏ်ယူဝံ့ ကြွားစွား ဟစ်ကြွေး လိုက်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းက ဝတ်ဖို့ဒ်အသင်းကို ဒုတိယပိုင်း ၅၆မိနစ်မှာ စမစ်ရိုဝီရဲ့ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူခဲ့တာပါ ။ ဒုတိယပိုင်းပြီးခါနီးလေးမှာ ဝတ်ဖို့ဒ်ကစားသမား …
သားဦးစေန မီးလိုမွှေဆိုတာ ယုံတမ်းစကားလား? တကယ်လား?
သားဦးစေန မီးလိုမွှေဆိုတာ ယုံတမ်းစကားလား? တကယ်လား? သားဦးစနေမွေးရင်ထိတ်လန့်တတ်တဲ့ လူတွေ အတွက်စနေသားသမီး ဟာဒုတိယ ဘုန်းကံအကြီးဆုံး စနေသားဦးမွေးလို့ ဓါးထမ်းကျော်တဲ့မိဘတွေ စောစောသေကုန်ကြလေရဲ့ စနေနေ့မရှိခဲ့ရင် ရတနာ၃ပါးလည်းလောကမှာမရှိနိုင်တော့ဘူးစနေနေ့ကို အကြောင်းပြုပြီးရတနာ ၃ ပါးစုံတဲ့ရတနာအခါတော်နေ့ပဲ စနေနေ့ဟာ တနည်းအားဖြင့်ဓမ္မစက်စတည်တဲ့နေစနေနေဟာ သိပ်မွန်မြတ် တဲ့နေ့ဘုရားရတနာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့စပေါ်သည်တရားရတနာနဲ့သံဃာရတနာကတော့စနေနေ့မှာစပေါ်တာ ဘုရားမွေးနေ့ သောကြာနေ့က အမြတ်ဆုံး ၆၄ရရတာနာ၃ပါးက ၄၇၇ ဘုရားက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တရားနဲ့သံဃာက စနေနေ့စပေါ်ရပါတယ် ရတနာသုံးပါးပေါ်တဲ့နေ့တွေဟာ ၄၇၇ ရတနာ ရတနာကို ကောက်လည်း ၄ရရပဲနော် စနေနေ့မရှိပဲ တရားလည်းမရှိ နိုင် သံဃာရတနာလည်း မရှိနိုင် တရားနဲ့သံဃာမှ မရှိရင် ဘုရားပွင့်ခဲ့ ကြောင်းလည်းမသိနိုင် ရတနာ၃ပါး နဲ့သာသနာကြီး ဆုံတွေ့ခွင့်ရတာ ဒါကိုသားဦး …
လီဗာပူးလ်ကိုအရှုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ ချန်ပီယံပြေးလမ်းကြောင်းထဲက ဝက်စ်ဟမ်း
လီဗာပူးလ်ကိုအရှုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ ချန်ပီယံပြေးလမ်းကြောင်းထဲက ဝက်စ်ဟမ်း ပရီးမီယားလိဂ်ပွဲစဉ် ၁၁ မှာ ဇယားထိပ်ဆုံးက ချဲလ်ဆီး သရေကျခဲ့တာကြောင့် လီဗာပူးလ်အသင်းအနေနဲ့ ရမှတ် တစ်မှတ်အကွာထိ ဟွာဟချက်ကျဉ်းမြောင်းနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးရခဲ့ပေမဲ့ အသုံးမချနိုင်ခဲ့ပဲ ယခုနှစ်ရာသီ ဆုဖလားပြေးလမ်းကြောင်းထဲရောက်လာတဲ့ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲစဉ်မှာ သွင်းခဲ့တဲ့ ဂိုးငါးဂိုးမှာ သုံးဂိုးက တည်ကန်ဘောတွေကနေ ခွင့်ပြုလိုက်ရတာပါ။ လီဗာပူးလ်အသင်းကို (၃-၂) ရလာဒ်နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက် ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ လေးပွဲဆက်အထိ အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းတွေက အဲဗာတန်၊ စပါး၊ အက်စတွန်ဗီလာနဲ့ ယခု လီဗာပူးလ်အသင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလေးပွဲမှာ ခံစစ်ကလည်း သုံးဂိုးသာခွင့်ပြုပေးထားရပါတယ်။ ဖလားပြေးလမ်းကြောင်းထဲက ပြိုင်ဘက် လီဗာပူးလ်ကို နောက်ကောက်ချလိုက်နိုင်တာကြောင့် ဝက်ဟမ်းစ်အသင်းဟာ မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ ရမှတ်တူ အဆင့် …
Previous 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 … 217 Next